Bressert Auto Trading Teknolojia - Bot - Auto Trading Systems - Indikatoren - Trading Course
Auto Trading Systems - Indikatara - Fivoarana ara-barotra
Bebe kokoa momba ny Teknolojian'ny varotra Bressert Hijery bebe kokoa
CycleTrader Indikatoren amin'ny varotra
Bressert Auto Trading Teknolojia
Jerome Bressert's - The PowerCLOSE
Walter Bressert’s – 12 Cardinal Fahadisoana ho Trading hoavy
Walter Bressert’s – Varotra sy ny Control
Join ny fantsona YouTube ka mijery be horonan-tsary ara-barotra ilaina isam-bolana
Vakio ny doza Disclosure eo anatrehanao hividy na hanofa misy ny vokatra eto amin'ity tranonkala.
Alefaso imailaka amin ny namana
Fanontaniana? / Comment / Demo? *
Copyright 2016. Bressert Trading Technology - Zo rehetra voatokana
Kidaladalan'ny fampisehoana vokatra maro raiki-tampisaka fetra, sasany izay voalaza eto ambany. Tsy misy solontena dia manjary misy tantara fa dia na dia mety hahatratra tombom-barotra, na very mitovy amin'ny an'ireo aseho; Raha ny marina, dia misy matetika maranitra mitovy kidaladalan'ny fampisehoana vokatra sy ny tena vokatra tatỳ aoriana tratra misy fandaharana manokana ara-barotra. Ny iray amin'ireo ny fetran'ny mety ho vitan'ny kidaladalan'ny fampisehoana vokatra milaza izy ireo ankapobeny voaomana ny tombontsoan'ny hindsight. Ankoatra izany, dia kidaladalan'ny ara-barotra dia tsy tafiditra amin'ny loza ara-bola, ary tsy misy firaketana an-tsoratra ara-barotra kidaladalan'ny afaka tanteraka mandrafitra ny fiantraikany ara-bola mety ny tena ara-barotra. Ohatra, ny fahafahana Haharitra Ihany very na ny manaraka fandaharana ara-barotra iray manokana na dia eo aza ny varotra ara-nofo dia very hevitra izay afaka ihany koa ny fiantraikany ratsy izany eo tena vokatra ara-barotra. Misy maro ny antony hafa mifandray amin'ny tsena amin'ny ankapobeny, na ny fampiharana ny rehetra manokana ara-barotra fandaharana izay tsy azo tanteraka isaina ho amin'ny fiomanana ny kidaladalan'ny fampisehoana vokatra sy ny rehetra izay mety fiantraikany ratsy raharaham-barotra valiny doza famborahana: hoavy sy ny forex varotra misy Mitana vy very ary tsy ho an'ny mpampiasa vola rehetra. Ny mpampiasa vola rehetra mety mety very na mihoatra noho ny fampiasam-bola voalohany. Capital doza ny vola izay mety ho very tsy mampidi-doza ny olona ny fiainana ara-bola na fomba fiarovana. Mety ihany capital tokony ampiasaina amin'ny varotra, ary ireo ihany no mety renivohitra ampy amin'ny tokony hihevitra varotra. Past fampisehoana dia tsy voatery ho avy filazana manoro ny matoanteny vokatra. Disclosure: Fiarovana sy ny fampiasam-bola amin'ny entana mitaky Mitana loza ary tokony tsy ho nanoratra tsy fahalalana ny loza rehetra mifandray amin'ny fivarotana sy ny fividianana ny Fiarovana. Ny cycletrader, profittrader voalaza Ao anatin 'izao ny rindrambaiko natao ho fitaovana manampy ny mpampiasa vola eo amin'ny fampiasam-bola fanapahan-kevitra. Manana andraikitra hany fanombanana sy mamaritra rehefa ary inona no teny mba manao na inona na inona varotra, ary ny famaritana ny mahamety ny safidy. By mampiasa vola ao amin'ny Fiarovana na ny entana, dia afaka very vola ny vola rehetra. Past fampisehoana tsy manome antoka amin'ny hoavy vokatra. Ny rafitra ara-barotra descibed amin'ny tranonkala ity raha ny marina dia tsy afaka manao anao vola sy Tokony ho fantatrao ny mety tafiditra voatanisa etsy ambony.